Qaahiro oo shir uga furmay Wasiirada Arrimaha dibadda Carabta | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Qaahiro oo shir uga furmay Wasiirada Arrimaha dibadda Carabta
Qaahiro oo shir uga furmay Wasiirada Arrimaha dibadda Carabta
Wasiirada arrimaha dibadda wadamada Carabta ayaa isugu yimid shir deg deg ah oo ay ku baaqdey Dowladda Sucuudi Carabiya,balse Wasiirka arrimaha dibadda ee Liibiya ayaa ka baaqsaday shirkaasi sababo aan la shaacin.
Sida ay qortay Wakaaladda Wararka ee Sucuudiga,shirkan Wasiirada arrimaha dibadda wadamada Carabta uga furmay xaruntooda ay ku leeyihiin magaalada Qaahira ee Dalka Masar waxaa looga hadlayaaFaragelinta ay sheegeen in Wadanka Iiran uu ku hayo wadamada Carabta,sidoo kalana Dawlahadaha Carabtu ay meel uga soo jeestaan qadiyadda Iiraan.
Wakaaladdu waxay intaa ku dartay in wadamada isutaga imaaraadka Carabta,baxrayn iyo kuwayd ay ku taageereen dawladda Sucuudi Carabiya qabashada shirkan
Dhanka kale Wakaaladda Wararka ee Reuters ayaa sheegtay mas’uul sare oo u Hadley Wadanka Lubnaan uu sheegay in Wasiirka Arimaha dibada Lubnaan Gibran Basil uusan ka soo qayb galin shirka Wasiirada Wadamada Carabta.
Muddooyinkii ugu dambeeyey waxa sii kordhayay xiisada u dhaxaysa Iiran iyo Sucuudi Carabiya taasi oo keeni karta in labada dawladood dhib ka dhex dhaco.
Qadiyadda Lubnaan ayaa kamid ah waxyaabaha ay isku khilaafsan yihiin,waxaana Ra’iisul Wasaarihii Lubnaan Saacad Alxariiri uu 4tii bishan November Sucudiga kaga dhawaaqay inuu xilkii iska casilay
Previous articleMadaxweyne Farmaajo oo u ambabaxay dalka Imaaraadka Carabta
Next articleMadxweyne Mogabe oo xilkii hoggaaminta Xisbiga Zanu PF laga qaaday